फ्लोइड हत्यासँगै अशान्त अमेरिका : आर शर्मा – Maitri News
फ्लोइड हत्यासँगै अशान्त अमेरिका : आर शर्मा
ईश्वर अर्थात् प्रकृतिको दृष्टिमा सबै प्राणी समान छन् तर मानिसको दृष्टि र व्यवहार असमान छ । जसले गर्दा सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट भनिएको मानिसबीचमै विभेद र रङ्गभेद छ । जर्ज फ्लोइड त्यसैको शिकार भए । २० डलर नक्कली नोट प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी अधिकारीले उनको बीभत्स ढङ्गले हत्या गरे । उनको हत्याको विरोधमा अमेरिका पूरै अशान्त बन्यो । हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी, लुटपाट, तोडफोडका क्रममा १२ जनाको ज्यान गयो, सयौँ घाइते भए, हजारौँ पक्राउ परे । ५५ अर्ब डलर बराबरको भौतिक क्षति भयो । २० भन्दा बढी सहरमा कफ्र्यु लगाउनु पर्यो ।
अश्वेत पुरुष फ्लोइडको परिवारका वकिलले प्रहरीलाई पूर्वनियोजित हत्याको आरोप लगाएका छन् । फ्लोइडको हत्याका लागि मिनियापोलिसका प्रहरी अधिकारी डेरेक शोभिनमाथि अभियोग लगाइएको छ । वकिल बेन्जामिन क्रम्पले उनलाई जानीजानी मारिएको बताएका छन् ।
उनको हत्या गर्ने आशय थियो… फ्लोइडले श्वास फेर्न दिन अनुरोध गरिरहँदा पनि उनले झन्डै नौ मिनेटसम्म घुँडाले घाँटीमा थिचेर हत्या गरे । फ्लोइडको हत्या अक्सिजनको कमीका कारण भएको एउटा निजी पोष्टमार्टम परीक्षणले पत्ता लगाएको छ । फ्लोइडको परिवारका तर्फबाट परीक्षक रहेका चिकित्सकले उनको मृत्यु मिनियापलिसका प्रहरी अधिकारीले गर्दन र ढाडमा थिचेका कारण भएको बताएका हुन् ।
न्युयोर्कका पूर्वपरीक्षक डा. माइकल बाडेनले भन्नुभयो, मेरो विचारमा हत्याको कारण घाँटीमा दबाइएकाले भएको हो । त्यसले अक्सिजनलाई दिमागमा जान रोक्छ र ढाडमा दबाउँदा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ ।
गत मे २५ मा अमेरिकाको मिनेसोटामा अफ्रिकी अमेरिकी फ्लोइडलाई २० डलरको नक्कली नोट प्रयोग गरेको आरोपमा खुलेआम घाँटी थिचेर प्रहरीले हत्या गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीहरुले विरोध गर्दागर्दै अर्का प्रहरी अधिकृत ताउ थाओको सहयोगमा उनलाई प्रहरी अधिकृत डेरेक चौभिनले घुँडाले घाँटीमा थिचेर मारेका थिए । भिडियो हेर्दा हत्या गर्ने गोरा प्रहरी एउटा कमिला किचेझैं सामान्य मुडमा जर्जको घाँटी थिचेका छन् । जुन निकै क्रूर र अमानवीय थियो ।
‘ब्ल्याक लाइभ्स् म्याटर’ भन्ने नाराका साथ फ्लोइड हत्याको विरोधमा अमेरिकाभर हिंसात्मक प्रदर्शन भए । कारबाहीको दायरामा ल्याइएका प्रहरी अधिकृतले अपराध गरेबापत सजाय पनि पाउलान् । तर एकैछिनको आवेगले कसैले अत्यन्तै सानो कारणमा मानिसको हत्या गर्न सक्दैन । त्यसका पछाडि दास मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ । अमेरिकामा अढाइ शताब्दीसम्म गोराहरुबाट काला जातिहरु दास बनाइए । अब्राहम लिङ्कनले दासता उन्मूलन गरेको आज १५५ वर्ष बितिसकेको छ । अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलामा सिङ्गो जीवन काला जातिको मुक्तिमा लगाए । यद्यपि आजसम्म काला जाति रङ्गभेदको शिकार बनिरहेका छन् । भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले दलित मुक्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरे । आज पनि त्यहाँ प्रणयहरुले प्रेममा अछूत साबित भएर मारिनु परेको छ ।
अमेरिकी संविधानमा रङ्गभेद र जातिभेद छैन तर व्यवहारमा अन्त्य भएको छैन । फ्लोइडको हत्यालाई लिएर अमेरिकी पूर्वरक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियोजित रूपमा रङ्गभेदी विभाजनको आगो सल्काएका आरोप लगाउनुभएको छ । ट्रम्पले देशव्यापी प्रदर्शन दमनका लागि सेना परिचालन गर्ने धम्की दिनुभयो तर सैनिक नेतृत्वले त्यसलाई सहज रुपमा लिएन । जसले गर्दा टम्प अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । ट्रम्पको यस्तो कार्यशैलीले देशको सेना र नागरिक समाजबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने म्याटिसको आरोप छ ।
‘डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जनतालाई एकताबद्ध गराउन प्रयास गरेको मैले कहिल्यै पाइनँ,’ म्याटिसले भन्नुभयो, ‘उनले हामीलाई विभाजन गर्न चाहन्छन् । हामीले तीन वर्षदेखि यही शैली पाएका छौँ । हामीले ट्रम्पबाट परिपक्व नेतृत्व नै पाउन सकेनौँ ।’
ट्रम्पका रक्षामन्त्री रहेका म्याटिसले सिरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सन् २०१८ को डिसेम्बरमा राजीनामा दिनुभएको थियो । राजीनामा पत्रमा म्याटिसले ट्रम्पको विदेश नीतिको कडा आलोचना गर्नुभएको थियो । उक्त राजीनामापछि ट्रम्पले म्याटिसलाई ‘आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिइएका जर्नेल’ को संज्ञा दिनुभएको थियो ।
फ्लोइडको हत्यापछि बर्खास्त गरिएका चार जना प्रहरी अधिकारीविरुद्ध नयाँ अभियोगहरू लगाइएको छ । अदालतका दस्तावेजमा प्रहरी अधिकारी डेरेक सोभिनविरुद्ध पूर्वयोजनाबिनाको आशययुक्त हत्याको अभियोग लगाइएको छ । उनलाई पारिस्थितिक कारणले हत्या भएको अभियोग लगाइएको थियो । यसअघि अभियोग नलगाइएका अन्य तीन जना प्रहरीमाथि गैरकानुनी काममा उक्साउनुका साथै मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरूमाथि लगाइएका नयाँ अभियोगबारे जनाउँदै मिनेसोटा राज्यका महान्यायाधिवक्ता किथ एलिसनले आफूहरू न्यायको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता एलिसनले विगतका घटनाहरूका आधारमा उनीहरूलाई दोषी ठहराउन कठिन हुने बताउनुभयो । मिनेसोटा राज्यमा बहालवाला एक जना प्रहरी अधिकारीलाई मात्रै सर्वसाधारणको हत्या गरेको दोषी ठहर गरिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेका बेला एन्टिफासिस्ट मुभमेन्ट एन्टिफालाई आतङ्कवादी सङ्गठन भएको आरोप लगाउनुभएको छ । ट्रम्प र महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले पछिल्ला केही दिनमा भएका दङ्गामा अराजकता देखिएको र त्यसका लागि वामपन्थी समूहहरू दोषी रहेको दावी गर्नुभयो । एन्टिफा आधिकारिक सङ्गठन नभएकोले उसलाई आतङ्कवादी भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? त्यो स्पष्ट भएको छैन ।
फ्लोइडकै हत्यालाई लिएर बेलायतको राजधानी लण्डनस्थित अमेरिकी राजदूतावासबाहिर पनि विरोध प्रदर्शन भए । उक्त र्यालीमा भाग लिने धेरैले ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर अर्थात् अश्वेतको जीवनले अर्थ राख्छ भन्दै आवाज घन्काएका थिए । जर्मनीको राजधानी बर्लिनस्थित अमेरिकी राजदूतावासबाहिर सयौँ प्रदर्शनकारी भेला भई विरोध प्रदर्शन गरे । अस्ट्रेलियामा पनि विरोध भएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि फ्लोइडको हत्या र कोरोना महामारी महँगो सावित हुने देखिएको छ । ट्रम्पले सुरुमै पूर्वसावधानी नअपनाएकै कारण एक लाखभन्दा बढी अमेरिकीको कोरोनाले ज्यान लियो भने लाखौँ सङ्क्रमित छन् । उहाँ अहिले पनि आफ्नै जिद्दीमा हुनुहुन्छ । आउँदो नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन यिनै कारणले पनि ट्रम्पका लागि अत्यन्तै महँगो सावित हुने देखिएको छ । उग्र राष्ट्रवादी कार्यशैली अन्ततः आत्मघाती हुन्छ ।
Previous Previous post: मौसम परिवर्तनले कोरोना भाइरसलाई असर गर्छ भन्नु गलत : डब्ल्यूएचओ
Next Next post: सांसद सरिता गिरीको घरमा कालो झन्डा